Banana Kong, sehatra Android mahafinaritra hafa | Androidsis
Manohy ny tolo-kevitry ny lalao mahazatra ho an'ny rafitra fiasa Android, amin'ity tranga manokana ity, a kilalao kilalao platformer mahazatra mampatsiahy ahy be ny fahombiazana lehibe amin'ny fotoana hafa, boriky Kong.
Ny lalao resahina dia mamaly ny anaran'i Banana Kong ary afaka mahazo izany amin'ny fomba iray isika afaka tanteraka amin'ny Google Play Store, na izany aza, miaraka amin'ny safidy hijerena, indrindra raha avelantsika ny zanatsika hilalao amin'ny terminal antsika, ny safidy tafiditra ao amin'ny fampiharana ny amin'ny fividianana app.
Inona no atolotry ny Banana Kong antsika?
Banana Kong mametraka antsika amin'ny kiraron'ny a gorila mahafatifaty eo am-pandosirana manandrana mandositra ny fihandronan'ny akondro. Fihetsiketsehana akondro masiaka izay tsy maintsy handosirantsika amin'ny hazakazaka hazakazaka, hisorohana ireo sakana misakana antsika.
Ankoatry ny fandehanana hatrany amin'ny hazakazaka, amin'ity lalao an-tsehatra mahafinaritra sehatra mety amin'ny sokajin-taona rehetraHanana fitaovam-pitaterana samihafa ihany koa isika handosirana ny horonan'ny akondro voalaza etsy ambony. Fiara tsy mahazatra izay hampiasantsika kisoa dia, touchan na sokatra ankoatry ny hafa, hahatratrarana ny tanjona farany dia ny hahatratra ny faran'ny efijery tsirairay.
Ilay lalao Banana Kong dia tafiditra tanteraka amin'ny Lalao Google Play ary aorian'ny fanekena hampiasa ny kaonty Google anay, dia hanana ny alàlan'ny statistikan'ny lalao rehetra izahay hampitahana ny fandrosoanay amin'izany sy ny fivoaran'ny namanay izay manana lalao mitovy amin'ny terminal Android-ny.
Tsy misy fisalasalana lalao style platformer ny ranomasin'ny fahafinaretana ary atolotra ho an'ny fianakaviana iray manontolo, izay ahafahan'ny tanora sy ny antitra mankafy ny tantara an-tsehatra mahatsikaiky mihazakazaka ao Kong, ilay gorila mahavoa nenjehin'ny horohoron-tany mahery.
Para ampidino maimaim-poana Tsy maintsy mamaky ny fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android ianao, Google Play Store amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy avelako eo ambanin'ireto andalana ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » [Video] Banana Kong, mitsambikina, mitsambikina, manosika ary aza manadino akondro eny an-dalana
Inona no hananan'ny boaty miafina Motorola?
[Trick] Ahoana ny fomba fampidinana horonan-tsary avy amin'ny You Tube nefa tsy mila fampiharana akory